I-miniature Deep Groove Ball Bearings Isingeniso Semikhiqizo - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-Mini Groove Deep Ball Bearings I-micro-deep groove ibhola yokubheja ibhekisela ochungechungeni lwe-metric, ububanzi obungaphandle obungaphansi kwe-9mm; uchungechunge lwama-inch, ububanzi obungaphandle kwezingu-9,525mm ezingaphansi kuka-9,525mm, izinto eziyinhloko yi-carbon steel, i-steel bearing, i-stainless steel, iplastiki, i-ceramics, kufaka phakathi ububanzi obukhulu kunazo zonke okungenziwa 0.6mm, ububanzi obubanzi be-1mm ngaphezulu.
I-Miniature Deep Groove Ball Bearings Izici Zezici
Emaceleni ama-micro-bearings ama-ultra-amancane, amabhethri amancane ama-groove ibhethri angu-68, uchungechunge olungama-69, uchungechunge lwama-60, njll, izinhlobonhlobo zezinhlobo ezingu-6 zeBrithani, ngalezi zisekelo, zingahlukaniswa zibe yiZZ enothuli. uchungechunge, nezimpawu ze-RS zenjoloba ezincane ezithwele uchungechunge oluthile, uchungechunge lwe-Teflon olubhekiselwe uchungechunge noluchungechunge lwe-flange njalo njalo
I-miniature Deep Groove Ball Bearings Inhloso eyinhloko
Kufaneleka kuzo zonke izinhlobo zemishini yezimboni, imishini encane yokujikeleza kanye nezinye izindawo ezinomsindo ophansi ozwakalayo, njengokuthi: imishini yehhovisi, i-micro-motor, i-instrumentation, i-laser engraving, amawashi amancane, ama-driver aphansi, i-rotor yokucindezela, i-drill yamazinyo, i-hard drive Ngamabhayisikili, ama-drums, amathoyizi okudlala, abalandeli bokupholisa ikhompyutha, i-Dianchao Ji, imishini yefeksi, ngakho-ke izindawo ezifanele.
I-Miniature Deep Groove Ball Bearings I-Miniature yokuzala ukwehluleka izizathu
Amaphesenti angama-40% we-ballonings encane ehlulekayo amancane ahlulekayo abangelwa udoti, ukungcola, ukungcoliswa kwemfucumfucu kanye nokubola. Ukungcola kuvame ukubangelwa ukusetshenziswa okungalungile nokusetshenziswa kabi kwezemvelo, kungabangela izinkinga zomsindo kanye nomsindo. Ukwehluleka kwe-micro-bearings okukhiqizwa imvelo nokungcola kuvinjelwa, futhi kungenzeka ukucacisa imbangela yokwehluleka okunjalo ngokubona okulula okubukwayo. Uma nje ukusetshenziswa nokufakwa kokucabangela, ukukhukhula okuncane okulula okulula ukugwema. Ukukhwabanisa kubonakala ngendlebe emncintiswaneni wezintambo ezincane obhekene nalokho okubangelwa umthwalo wethonya noma ukufakwa okungalungile. Ukukhwabanisa kuvame ukuvela lapho umthwalo udlula umkhawulo wokuvunwa kwempahla. Uma ukufakwa kungalungile ukuze umthwalo ozokwethula i-micro-bearing ring uzoveza ukukhwabanisa. Umgodi ongeyindandatho yokuthela encane futhi uveza umsindo, ukudlidliza kanye ne-torque eyengeziwe.